YEYINTNGE(ကနဒေါ): Monday, January 10
9 attachments — Download all attachments (zipped for
10 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3667K View Download
10 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1703K View Download
Never Be A Slave Under SPDC Military Rule.pdf
1219K View Download
HRDP report about Human Rights and Election 2010.pdf
979K View Download
10 Jan 2011 Yeyintnge's Diary
BY YeYint Nge ... 1/10/20110comment
BY YeYint Nge ... 1/10/2011 1 comment
We are listening to what Daw Suu is saying. We heard what Daw Su said.
HRDP report about Human Rights and Election 2010
DKBA ဖလူးဒေသ အတွင်း တိုက်ပွဲ အခြေအနေ
DKBA နှင့် နအဖ တိုက်ပွဲကြောင့် ထိုင်းစစ်တပ် နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
ဧရာဝတီ Monday, 10 January 2011 18:25
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီခရိုင် ဖလူးဒေသ၌ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) နှင့် နအဖ တပ်ဖွဲ့များအကြား ယနေ့ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ လက်နက်ကြီးကျည်များ ထပ်မံ ကျရောက် ပေါက်ကွဲသဖြင့် ထိုင်းစစ်တပ်က နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ထားလိုက်သည်။
ယနေ့နံနက် ၇ နာရီခန့်က စတင် ဖြစ်ပွားသည့် နှစ်ဘက် တိုက်ပွဲတွင် စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (စကခ) ၁၂ လက်အောက်ခံ နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက DKBA တပ်ဖွဲ့များ ရှိသည့်ဟု ယူဆရသည့် ကဆောဝါးလေး တောင်တန်း တလျှောက် လက်နက်ကြီး ကျည် အလုံး ၁၀၀ ခန့် ကြိုကြား ပစ်ခတ်လျက်ရှိရာ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ လက်နက်ကြီးကျည် ၆ လုံး ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းစစ်တပ်က ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နှစ်ဘက် တိုက်ပွဲတွင်လည်း နအဖ တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးကျည် အလုံး ၁၀၀ ခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ထိုင်းဘက်ခြမ်း မဲဆောက်မြို့နယ် မဲ့ကိုကင်း ရွာရှိ ကော်မနောင်း အနီးတွင် ၁၁ လုံးကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နအဖ ဘက်မှ ပစ်ခတ်သည့် လက်နက်ကြီးကျည်များ ထိုင်းဘက်ကျရောက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်ကို ထိုင်းဘက်မှ စစ်ဆေးလျက် ရှိပြီး လိုအပ်ပါက ထိုင်း-မြန်မာ နယ်ခြား ကော်မတီမှ တဆင့် မြန်မာဘက်သို့ ကန့်ကွက်သွားမည်ဟု မဲဆောက် အခြေစိုက် အမှတ် (၄) ဒေသဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲရေး တပ်မှ တပ်မှူးတဦးက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖလူးဒေသတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားနေသည့် DKBA တပ်မဟာ ၅ မှ စစ်ဆင်ရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင် က နှစ်လတာ တိုက်ပွဲကာလအတွင်း DKBA နှင့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပြောက် ကျားစနစ်ဖြင့် ချုံခိုတိုက်မှုကြောင့် နအဖ ဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုများစွာ ရှိခဲ့သည့်အတွက် ဖလူးဒေသကို စိုးမိုးမှု အမြန်ရယူရန် ယခုကဲ့သို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“နအဖ က ပြောက်ကျားစနစ်ကို ကြောက်တယ်။ သူတို့ဘက်က အကျအဆုံးထဲမှာ ကျနော်တို့နဲ KNUပူးပေါင်း တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ဖြောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်(စနိုက်ပါ သမား)တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်”ဟု ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင်က ဆိုသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး“လက်နက် အင်အား၊ လူအင်အားချင်း ကွာခြားမှုအရ ကျနော်တို့က ပြောက်ကျားစစ်နစ်ကို သုံးတာဖြစ် တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ နအဖ ဘက်က တလကို ထိခိုက်ကျဆုံးမှု များတာရှိတဲ့အတွက် အခုလိုမျိ်ုးကျနော်တို့ကို လက်နက်ကြီး အလုံး ရေ ရာနဲ့ချီပြီးတော့ တိုက်နေတာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများအတွင်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သီးခြားအတည်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ယနေ့ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် နှစ်ဘက် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများရှိခဲ့ပြီး နအဖ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုကို မသိရှိရသေး သော်လည်း DKBA ဘက်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု DKBA တပ်မှူး တဦးက ပြောသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် ယနေ့နှင့် ယမန်နေ့က ရာနှင့် ချီသည့် ဖလူး ဒေသခံ ရွာသားများ ထိုင်းဘက်ခြမ်း မဲဆောက်မြို့နယ် အတွင်း သို့ ၀င်ရောက်ခိုလှုံလျက်ရှိသည်ဟု ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသည့် မဲဆောက်မြို့ မယ်တော် ဆေးခန်းမှ ဆေးမှူး စောနေဦးက ပြောသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသည့် သတင်းများအရ ယမန်နေ့ကစတင်သည့် နအဖ ထိုးစစ်သည် ဖလူးဒေသကို စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားပြီး DKBA တပ်မဟာ(၅)ဌာနချုပ် ရှိသည့် ဝေါ်လေဒေသသို့ နအဖ တပ်များ ထိုးစစ်ဆင်ရန်အတွက် စစ်ချီရာတွင် လွယ်ကူစေရန် စစ် ပရိယယ် သုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်း နယ်ခြားစောင့် တပ်မှူးတဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မြ၀တီခရိုင်မှတဆင့် ဝေါ်လေဒေသရှိ DKBA တပ်မဟာ(၅)ကိုရောက်ရှိရန် နအဖ တပ်များ လာမည့် ပုံမှန်လမ်းကို DKBA နှင့် KNU တပ်များ ပိတ်ဆို့ထားသဖြင့် အခြားတောလမ်းများမှ လာရောက်ရန်ကြိုးစားနေသော နအဖ တပ်များ မိုင်းကွင်းများနှင့် ပြောက်ကျား စစ်ကြောင့် အဆိုးဝါးဆုံး အနေအထားများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရမည်ဟု ဝေါ်လေအခြေစိုက် KNU တပ်ရင်း ၂၀၁ ၏ ဒု တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြည်အောင် ကလည်း ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် နှင့် ၈ ရက်နေ့က မြ၀တီမြို့နယ် အပါအ၀င် ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့်ကြာအင်း ဆိပ်ကြီးမြို့နယ်များတွင် စစ်အစိုးရတပ်နှင့် DKBA တပ်မဟာ ၅ တို့ တိုက်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ် နီးပါး တိုက်ပွဲ များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။
Posted by admin on January 10, 20110Comment
ဒီကနေ့ ဝေါလေဒေသ တပ်ကော်ကျိုးနဲ့ ကဆောဝါးလေးကြားမှာ နအဖ စကခ (၁၂) လက် အောက်ခံ ခမရ ၅၄၉ နှင့် ဒီကေဘီအေ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဒီနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခန့်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ နအဖ ဘက်မှ ၁၅ ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပြီး ဒီကေဘီအေဘက်မှလည်း ၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ် ရာ ရခဲ့ပြီး နအဖ ဘက်က တိုက်ပွဲထဲမှာ အသုံးပြုဖို့ခေါ်လာတဲ့ အကျဉ်းသား ၆ ဦးလည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခု ဝေါ်လေဒေသ ထိုးစစ်အတွက် နအဖ ဘက်က တပ်ရင် ၁၀ ကို အသုံးပြုပြီး အင်းစိန် မော်လမြိုင် ဘားအံ တောင် ကလေးက အကျဉ်းသားစုစုပေါင်း ၈၀၀ ကို တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ အသုံးပြုဖို့ ခေါ်လာတယ်လို့လဲ ကြားသိရပါတယ်။ ဒီနေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာဟာ လေးဒေးလို့ခေါ်တဲ့ နအဖ စခန်းဟောင်း နေရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစခန်းနေရာဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ဖလူးစခန်းကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ စခန်းကုန်း တနေရာဖြစ်တယ်လို့ ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ ၅ ကလို့ထူးဘော ဗျူဟာမှ ဗိုလ်ဆန်းအောင်က ပြောပြသွားပါတယ်။
အကျဉ်းသားများကို ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွင် ပေါ်တာအဖြစ်ခေါ်ဆောင်
ပြာသိုလဆန်း ၆ရက်။ဇန်နဝါရီ ၁၀၊၂၀၁၁။
နော်အဲဏီ(ဇန်နဝါရီ-၁၀)။ ။နအဖစကခ (၈) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများနှင့် ဒီကေဘီအေဗျူဟာမှူး စောကျော်သက် အဖွဲ့သည် မနေ့ကနှင့် ဒီနေ့ တွင် မြ၀တီ -ဝေါ်လေ ကားလမ်းဘေးရှိ တပ်ခေါ်ကျိုးတောင်တန်း၊ ကဆောဝါးလေး တောင် တန်း တစ်ဝိုက်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယခုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများတွင် နအဖဘက်မှ အကျဉ်းသားများကို ရှေ့တန်းတွင် ရိက္ခာများ ၊ ကျည်ဆံများ သယ်ရန်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အကျဉ်းသားများကို ၅ ယောက်တစ်တွဲ ခါးတွင်ကြိုးချည် ၊ ခြေထောက်တွင် သံကွင်းများချိတ်ထားပြီး ပစ္စည်းတွေထမ်းခိုင်းသည်ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားပွယ်က ပြောပါသည်။
“ အကျဉ်းသားတွေကို ၅ယောက်တစ်တွဲ ခါးမှာကြိုးချည်ထားတယ် ၊ ခြေထောက်မှာလည်း သံကွင်းတွေ ချိန်ထားတယ်၊ ကျနော်တို့ ပစ်တဲ့အခါမှာ အကျဉ်းသားတွေကို ရှောင်ပြီးပစ်မရဘူး ၊ သူတို့က နအဖ တွေနဲ့ရောနေတယ်၊ အကျဉ်းသားတွေ ထိချင်လည်း ထိမှာပေါ့”
အချို့အကျဉ်းသားမျာကိုမူ မိုင်းရှင်းကရိယာအနေဖြင့်အသုံးပြုရန် ခေါ်ဆောင်လာသည်ဟု ဒီကေဘီအေ စစ်ဆင် ရေးမှူး စောဆန်းအောင်မှ ပြောပါသည်။
“တချို့ အကျဉ်းသားတွေကို ပေါ့နော် သူတို့က ရှေ့ကနေသွားခိုင်းတာတွေရှိတယ်၊ မိုင်းရှင်းကရိယာအနေနဲ့ သူတို့ အသုံးပြုနေတာပေါ့နော်၊ သူတို့ကဝေါ်လေကိုသွားပြီး တပ်ချိန်းမယ် ၊ ပြီးရင်ရိက္ခာပို့မယ်၊ အဲဒါ သူတို့လမ်းကြောင်း ရှင်းနေတယ်”
ရှေ့တန်းတွင် အကျဉ်းသားများကို ပေါ်တာအနေဖြင့် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပေါ် အေအေပီပီမှ ကိုတိတ်နိုင်ကတော့ ယခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
“အခုဆိုရင်တော့ ဖားအံနဲ့မော်လမြိုင်ဆိုတာကတော့ ရှေ့တန်းနဲ့ပိုနီးတာနေမှာပေါ့လေ စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ ပိုနီးတာပေါ့၊ အရင်တုန်းကလည်း ဒါမျိုးသာဓကတွေ တောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်လေ၊ ဥပမာ သူတို့က နှစ်နည်းနည်းကျတဲ့သူတွေ ၊ လေးငါးခြောက်လ ကျတဲ့သူတွေကို ခေါ်သွားပြီးတော့ လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်တာတွေရှိတယ်၊ အဲဒီအခါမှာလည်း အဲဒီလိုပေါ်တာလိုက်သွားတဲ့အခါမှာ တခါတည်း သေတမ်းစာပါ ရေးရတဲ့ အနေအထားမျိုး ကြုံရတာရှိပါတယ်၊ ဒီရှေ့တန်းပေါ်တာဆွဲ မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အမွေတွေဘယ်သူ့ကို လွဲခဲ့မလဲ ၊ အမွေလွဲခဲ့မယ့်လူရှိလား၊ နာမည်တွေရေး ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေရေးခဲ့ ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေ လုပ်တာရှိပါတယ် ၊ ထုံးစံရှိပါတယ်၊ ဆိုတော့ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့ တစ်အချက်က ပေါ်တာလိုက်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်က အကျဉ်းထောင်ထဲကနေ သူတို့ထွက်သွားရတယ်၊ ပြီးတော့ သူတို့မိသားစုအတွက် အမွေဆက်ခံမယ့်လူအတွက် လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ကို စိတ်မကောင်း တာတွေရှိပါတယ်၊ သူတို့တွေကို ရှေ့တန်းမှာ မိုင်းရှင်းကိရိယာအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုတာရှိပါတယ်၊ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေမှာလည်း ရေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါမျိုးဆိုတာက လူ့အခွင့်အရေးကို အကြီးအကျယ် စော်ကားတဲ့ကိစ္စပဲလို့ ကျနော်တို့က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။”
နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများတွင် ယခု တိုက်ပွဲက အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲဖြစ် သည်ဟု ဒီကေဘီအေဘက်မှ သုံးသပ်ပြောဆိုပါသည်။
နအဖဘက်တွင် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှု ရှိသည်ဟု လည်း ဒီကေဘီအေဘက်က ပြောပါသည်။ ၄င်းတို့အနေနဲ့က အကျဉ်းသားများ ထိခိုက်မှု ရှိမရှိကိုတော့ အတည်ပြု မပြော ဆိုနိုင်ပေ။
Here is the official e-mail of NLD.
National Youth Network သို့ .==============>>>>>>>
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး : ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် နှင့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ (၂)
တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ အနာဂတ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခြင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ရှိရုံတင်မက ဒီပြည်ထောင်စုကြီး၊ ဒီ တိုင်း ပြည်ကြီးကိုချစ်တဲ့စိတ်၊ ပြည်သူလူထုတွေကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်မှသာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရေရှည် တည်တံ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဟာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်မှုရေရှည်တည်တံ့ရေးအတွက် အုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် (ပြည်ထောင်စုချစ်စိတ်)ရှင်သန်တိုးပွားရေး အ တွက် အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်သင့်ကြပါတယ်။
ခေတ်သစ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ဆောက်သည့်နေရာမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း၊ လူမျိုးစုတိုင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်း အုတ်တချပ် သဲတပွင့်အဖြစ် စုစည်းပါဝင်နိုင်အောင်၊ ပြည်ထောင်စုအကျိုးစုစည်းသယ်ပိုးလာအောင် စည်းရုံးလုပ် ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကျနှုပ်နိုင်ငံဟာ အိမ်နားနီချင်းနိုင်ငံများနှင့်သာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက် ရေခံမြေခံကိုသဘာဝက ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူများကသာ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆို ရင် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိနိုင်ပါ။ အောက်ကျနောက်ကျ အခြေ အနေများက ကင်းဝေးဖို့အတွက် ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်တွေ ရှင်သန်လာဖို့ လိုအပ်ပါမယ်၊ ပြည်သူတစ်ယောက်ချင်းမှာ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ ပြည်ထောင်စု အကျိုးစုစည်းသယ်ပိုးဖို့ စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရာမှာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်မျိုးထက် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို အလေးပေးသုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး လူမျိုးစု များအားလုံးကို လွမ်းခြုံစည်းရုံးတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးအား force ပါတယ် လို့မြင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။
လူ့သဘာဝအရ ဂုဏ်ယူစရာများကြုံလာရင် လူမျိုးနာမယ်တပ် ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်။ ဒီလိုဘဲ တခါတရံမှာ လူ တစ်ယောက်မကောင်းပြုမိတာကိုပင် လူမျိုးနာမည်နဲ့ကိုင်တုတ်တတ်ကြတယ်။ “ဒီကောင် တစ်ယောက်မကောင်း တာနဲ့ဘဲ ငါတို့လူမျိုး တစ်မျိုးလုံးထိခိုက်တယ်.. တမျိုးလုံးနာမည်ပျက်တယ်” စသဖြင့် အပြောခံရသူလူမျိုးက ခံစားပြောဆိုတတ်ကြတယ်။ လူမျိုးတစ်မျိုးက တစ်မျိုးကိုစော်ကာမော်ကားပြုမိတဲ့အခါမျိုးမှာ အမျိုးကိုထိရင် မချိအောင်နာတယ် ဆိုတဲ့သုံးနှုံးပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မျိုးချစ်စိတ်အခြေခံကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ မျိုးချစ်စိတ်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်တဲ့၊ ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့၊ စိတ်ဆိုတဲ့ဘက်ကို ဆွဲစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်၊ အလေးပေးစဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားတာကလည်း သဘာဝတော့ကျပါ တယ်။ ဒီမျိုးချစ်စိတ်မျိုးကို လူမျိုးရေးမျိုးချစ်စိတ် racial patriotic လို့ ဆိုလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံဟာ national sovereignty state အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးချစ်စိတ် ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လူမျိုးအားလုံးခြုံငုံပါဝင်တဲ့ချစ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားမျိုးချစ် စိတ်လို့ ဆိုလို့ရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မတူကွဲပြားသည့်လူမျိုးစုများ စုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊ မျိုးချစ်စိတ်လို့ ပြောရင် အထက်ဆိုခဲ့သလို ကိုယ့်အမျိုး၊ ကိုယ့်လူမျိုးဘက်ကို အလေးပေးစဉ်းစားတတ်တာကတစ်ကြောင်း၊ လူမျိုးစုတန်းတူရေးပြသနာများရှိနေတာကတစ်ကြောင်း တို့ကြောင့်မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိရေး၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ရှင် သန်ထက်မြက်ရေး ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်များ၊ ကြွေးကြော်သံများဟာ တနိုင်လုံး၊ လူမျိုးအားလုံးကို လွမ်းခြုံ စုစည်း စေဖို့ရာမှာ တွန်းအား(force) နည်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် ချစ်စိတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံ၊ ဆောင်ပုဒ်က မျိုးချစ်စိတ်ရှင်သန်ရေး ဆောင်ပုဒ်ထက် တနိုင်ငံလုံးကိုလွမ်းခြုံစုစည်းအား ပိုပြီး ပါ တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ်ကို မြန်မာစာဦးစီးဌာနထုတ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓါန်မှာ nationalism လို့ ဖေါ်ပြပါတယ်။ patriotism နဲ့လည်း ဆင်တူပါတယ်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ် မြန်မာ- အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်မှာ မျိုးချစ်ဟူသော ဝေါဟာရကို patriot ဟုဖေါ်ပြထားပါတယ်။ online planet dictionary က patriot ကိုaperson who loves (and serves) his country ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ရှေ့ဆောင်အဘိဓါန်ကaperson who loves and is ready to defend his country ဟုလည်းကောင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ မြန်မာနိုင်ငံသား (မည်သည့် လူမျိုးစု၊ မည်သည့် လူမျိုးမဆို၊ မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို) ဘယ်သူမဆို တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်သူတရပ်လုံး အတွက်အလုပ်အကြွေးပြုသူဟာ မျိုးချစ်ပုဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊ ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအလုပ်အကြွေးပြု စိတ်ကို တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် national patriotism လို့ဆိုလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်(မြန်မာဝေါဟာသဘောအရ)ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ လူမျိုးစုအားလုံး၊ ပြည်သူအားလုံးကို ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တွင်းက လူမျိုးတစ်မျိုးမျိုး ဘဲချစ်တဲ့စိတ်မွေးမယ်ဆိုရင် ဒါ တိုင်းပြည်ချစ် စိတ်ရှိသူလို့ဆိုလို့မရတော့ဘဲ၊ လူမျိူးရေးမျိုးချစ်စိတ်ရှိသူသာဖြစ်မယ်။ လူမျိုးကြီးဝါဒ သို့မဟုတ် ကျဉ်းမြောင်းသည့် လူမျိုးရေးဝါဒ မွေးမြူကျင့်သုံးတာသာဖြစ်ပါမယ်။
တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ဘက်ကို အလေးပေးပြောနေလို့ မျိုးချစ်စိတ်မရှိရဘူးလို့၊ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး၊ မျိုးချစ်စိတ် ဆိုတာလည်းရှိသင့်တဲ့အရာပါ။ မျိုးချစ်စိတ်ဟာရှိသင့်တဲ့အရာဖြစ်သလို သိသင့်တဲ့အရာလည်း ရှိပါတယ်။ မျိုးချစ် စိတ်မှာ ကောင်းတဲ့အခြင်းအရာများရှိသလို မကောင်းတဲ့အခြင်းအရာများလည်းရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အခြင်းအရာ က မျိုးချစ်စိတ်ဟာ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ လူမျိုးရေးလက္ခဏာ၊ နိုင်ငံရေး အဆင့်အတန်း၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ စသည်တို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေတာဖြစ်တယ်။ မျိုးချစ်စိတ်မရှိရင် မိမိတို့လူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံး စံ၊ စာပေတွေတိမ်ကောသွားပြီး နှောင်မှာ လူမျိုးပါပပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
တဖက်မှာ မျိုးချစ်ဝါဒရဲ့ မကောင်းတဲ့ အချင်းအရာတွေလည်းရှိတယ်။ တရားလွန် မျိုးချစ်ဝါဒီများ၊ အစွန်းရောက် လူမျိုးရေးမျိုးချစ်ဝါဒီများပေါ်လာတတ်တယ်။ ဒီလိုိတရားလွန်မျိုးချစ်များ တနည်းအားဖြင့်မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် လူမျိုး အခြင်းခြင်းအကြား ပဋ္ဋိပက္ခများဖြစ်လာပြီးစုစည်းမှုပြိုကွဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ကျိုးအမြတ်ရှာဖို့ မျိုးချစ်စိတ်ကိုအသုံးချမဲ့ အမည်ခံမျိုးချစ်တွေလည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
မတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးများ၊ စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး အပြန်အလှန်လေးစားဖို့လိုအပ်တယ်။ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ အထူးသဖြင့် လူနည်းစုများရဲ့ နိုင်ငံရေးအဆင့်အတန်း၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ အလေးထားအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ လူမျိုးတစ်မျိုးက တစ်မျိုးကို၊ တစ်က တစ်ခုကို လွမ်းမိုးမှု ဖိနှိမ်မှုတွေရှိနေ မယ်ဆိုရင်၊ ခွဲခြားမှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုက တစ်ခုကို ဇွတ်လွမ်းမိုးဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ အစွန်းရောက်စိတ်များပေါ်လာပြီး မလိုလားအပ်တဲ့၊ ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေနဲ့ကြုံရ တတ်ပါတယ်။ ရှိနေတဲ့၊ ရှိခဲ့တဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှုတွေလဲ ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ဆိုရာမှာတော့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး၊ တိုင်းပြည်တွင်းရှိပြည်သူတရပ်လုံးကို ချစ်တဲ့စိတ်၊ လူမျိုး အားလုံးအတွက် အကျိုးပြုတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့ လူမျိုးရေးအရ ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်မှု ကင်းဝေးစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသစ် တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် ရှင်သန်ထက်မြက် ရေးအတွက် နိုးဆော်တိုက်တွန်းဆောင်ရွက်သင့်ကြပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါ တယ်။
၉ ရက် ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
များမကြာမီ သတင်းပတ်တခုက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ငါးမင်းဆွေဆိုလား-ဖားမင်းဆွေဆိုလား။ ပေါကြောင်ကြာင်လူတယောက်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရမ်းရမ်းကားကားလာ ရောက်ပြောဆိုသွားတယ်လို့ သိရတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်လူပေါ ယက်ထောပြီးရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလာပြီး အကြောင်းမဲ့လာနှောက်ယှက်တဲ့ ဒုတိယမြောက် လူပေါတယောက်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
နာမည်က ငါးမင်းဆွေဆိုပေမဲ့ စစ်အစိုးရကို ဖားတဲ့ ဖားဆောင်းပါးတွေ ရေးနေသူမို့ ပြည်သူလူထုကတော့ သူ့ကို ဖားမင်းဆွေလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ငါးမင်းဆွေ-ဖားမင်းဆွေဆိုပြီး နာမည်က နှစ်မျိုးရနေတော့ ဖားတပိုင်း ငါးတပိုင်းမင်းဆွေလို့ ခေါ်ရင်ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။
သူက အမေရိကန်တို့ အီးယူတို့က စစ်အစိုးရအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘဲ လုပ်နေသလိုလို။ ဒီကိစ္စကို မလုပ်ဘို့ လာရောက်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ သူမှ မဟုတ်ပါဘူးလေ။ စစ်အစိုးရ လက်ပါးစေတော်တော်များများက ဒီလိုဘဲ စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြတာပါ။ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေ စီးပွားရေးကြပ်တည်းနေတာတွေဟာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လို့လဲ ပြောကြပြန်တယ်။
ဒါဟာ တော်တော် အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ ပြောဆိုမှုပါ။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်သူတွေ စီးပွားရေးအရ လိုတာထက်ပိုပြီး ရုန်းကန်နေရတာဟာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်တပ်က အာဏာစယူခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကတဲကပါ။
အဲဒီအချိန်ကတဲက ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ အကြီးစားလုပ်ငန်းတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်း။ အလယ်အလတ်နဲ့ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေလည်း တားဖြစ်ချုပ်ကိုင်ခံခဲ့ကြရနဲ့။ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ဆန်ရှား၊ ဆီရှား၊ ဆားရှား၊ ဆေးရှား ဘာမဆိုအကုန်ရှား ဖြစ်ကုန်ခဲ့တာ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းမှန်သမျှ မှောင်ခိုခေတ်။ အဲဒီခေတ်က အမျိုးသမီးကြီးတယောက် မန္တလေးမြို့ကနေ ဇာတိအညာမြို့ကလေးတမြို့ကိုအပြန် မိဘဆွေမျိုးတွေကို ကန်တော့ဘို့၊ လက်ဆောင်ပေးဘို့ ကျားဝတ်ပုဆိုး ငါးထည်သယ်လာတာ လမ်းမှာ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးပုဒ်မနဲ့ အရေးယူအဖမ်းခံ အချုပ်ကျခဲ့ဘူးပါတယ်။ စာရေးဆရာနိုင်ဝင်းဆွေရဲ့ (မသိန်းရှင်ဆီပို့ပေးပါ) ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး ဘ၀သရုပ်ဖေါ်ဝတ္ထုထဲက ညှိညှိရဲ့ ထန်းလျက်မှောင်ခိုသည်ဘ၀ဟာ စိတ်ကူးယဉ် မဟုတ်ပါဘူး။
လက်တွေ့ မြန်မာပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေပါဘဲ။ ကွယ်လွန်သူ စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေ၀င်းရဲ့ မရေမရာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အောက်မှာ ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတာ ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေ ၀တ္ထုထဲကထက်ဆိုးတဲ့ ဘ၀တွေတောင်ရှိခဲ့သေးတယ်ဆိုတာ ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးစနစ်ခေတ်ကို မှီလိုက်သူတိုင်း သိကြပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်လို သယံဇာတပေါကြွယ်ဝပြီး လူဦးရေလည်း သိပ်ကြီးမများလှတဲ့ တိုင်းပြည်တခုမှာ စားဘို့၊ ၀တ်ဘို့၊ နေဘို့ ဆိုတာလောက်ကတော့ ဘယ်သူဘဲ အစိုးရလုပ်လုပ် အထိုက်အလျောက်တော့ နေနိုင်၊ စားနိုင်၊ ၀တ်နိုင်ကြတာချည်းပါဘဲ။ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်နေသူအားလုံး အစိုးရဖိနှိပ်မှု တစုံတရာသာ မရှိဘူးဆိုရင် နေရေးလည်း အထိုက်အလျောက်တော့ ရနိုင်တယ်။ စားရေးလည်း အထိုက်အလျောက်တော့ ရနိုင်တယ်။ ၀တ်ရေးလည်း အထိုက်အလျောက် ရနိုင်ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေဟာ လူတဦးခြင်း မိသားစုတခုခြင်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမဲ့ ပြဿနာလောက်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ်။ အိမ်တအိမ်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးတယောက် အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းတခုရှိရင်တောင် မြန်မာပြည်အနေအထားက အထိုက်အလျောက်နေလို့ရတဲ့ ကာလတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။
င်္From Ar Kar..
အိမ်တအိမ်မှာ၊ မိသားစုတခုမှာ အချိန်အတိုင်းအတာတခုနဲ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ဘို့ သင့်တော်တဲ့ မီးစက်၊ အင်ဗာတာ၊ အသေးစားဘက်ထရီမီးချောင်း၊ မီးတိုင်ဆိုတာမျိုးရရှိဘို့ လူတိုင်းအိမ်တိုင်း မိသားစုတိုင်း လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံး ၂၄ နာရီ မီးလင်းဘို့ ဆိုတာကတော့ အစိုးရကလုပ်မှသာ ရနိုင်ပါမယ်။
တိုင်းသူပြည်သားတယောက် နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်တာ တုတ်ကွေးဖြစ်မျိုး အသေးစား ကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုးကို လူတဦးခြင်း မိသားစုတခုခြင်းက ဖြေရှင်းလို့ ရပေမဲ့ကင်ဆာလို အေအိုင်ဒီအက်(စ်)လို၊ ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသရမဲ့ ရောဂါမျိုး အကြီးစားကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်တော့ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရတရပ်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်တွေရှိမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။
ပြည်သူလူထု လက်တွေ့ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ခံစာနေရတာက နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်မီး (၂၄) နာရီလင်းအောင် အစိုးရက လုပ်သင့်တယ်။ မလုပ်တော့ လူဦးချင်း မိသားစုတခုခြင်းက ကိုယ့်မိသားစုကလေး မီးလင်းနိုင်ဘို့ မီးစက်ဝယ်ဘို့ ရုန်းကန်ရတယ်။ အင်ဗာတာလို မီးအားမြှင့်စက်လို ပစ္စည်းတွေဝယ်ဘို့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် တရုတ်မီးတိုင်ကလေးဝယ်ဘို့ ကြံစည်ရတယ်။ မိမိရဲ့မိသားစု အဆင့်အတန်းအလိုက် သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ငွေကို အပိုသုံးရှာဖွေနေကြရတယ်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုတွေ ကျေးလက်တွေမှာ ဘက်ထရီမီးကလေးထွန်းနိုင်ဘို့ စားသောက်ရေးထဲကဖဲ့ပြီး ကုန်ကျရတယ်။
ကျန်းမာရေးဘက်မှာ ဆိုရင်ကော။ သာမာန်အားဖြင့် တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကလေးမီးဖွားဘို့၊ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသဘို့၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်လို ကပ်ရောဂါဘေးတွေအတွက် အစိုးရရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေ ပျက်ယွင်းနေတဲ့အခါ မိသားစုတခုမှာ ကြီးကြီးမားမား ကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုး ကြုံလိုက်တာနဲ့ တသက်လုံး စုဆောင်းလာသမျှ ငွေကို ထုတ်ပြီး သုံးစွဲရတော့တယ်။ မိသားစုတခုမှာ လူတယောက် မကျန်းမာပြီဆိုရင် ကျန်မိသားစုဝင်တွေက တသက်လုံး စုဆောင်းလာတဲ့ ရွှေပြောင် ငွေပြောင်နဲ့ လူမွဲစာရင်းဝင်သွားတယ်။ နောက်ထပ် မိသားစုဝင်တယောက် မကျန်းမာရင် ကုသစရာ ငွေမရှိတော့တဲ့အထိ ဖြစ်နေကြရတယ်။
ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တွေက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတတ်မြောက်ဘို့ သင်နည်းအထောက်အကူပစ္စည်းတွေ မပြည့်စုံဘူး။ မတတ်ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်သားသမီးသူများနည်းတူ လူတလုံး သူတလုံးဖြစ်ဘို့ နိုင်ငံရပ်ခြားသွားပြီး ပညာသင်ဘို့ အားထုတ်ကြရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပြည်သူတွေမှာ မပင်ပန်းသင့်ဘဲ ပင်ပန်းနေကြရတာ လက်တွေ့ပါဘဲ။
ပြီးတော့ စစ်အစိုးရဟာ သူကိုယ်တိုင်က ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်တွေကို ရောင်းသူ ကုန်သည်လုပ်နေတယ်။ ကုန်သည်မှ မတရားအမြတ်ကြီးစား ကုန်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရှားပါးအောင် လုပ်ထားတယ်။ ပြီးတော့ သစ္စာခံမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ပါမစ်ချစနစ်နဲ့ မတရားရောင်းကုန် ဖြစ်စေတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ကားသချိုင်းတွေက ကားအစုတ် တသိန်းတန်ကို မြန်မာပြည်မှာ ပါမစ်ဈေးသိန်းရာကျော်ဖြစ်ပြီး လူထုကို ပြန်ရောင်းစားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သိန်း ၃၀၀-၄၀၀ လောက်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျပန်ကားတွေဟာ ဂျပန်မှာ ကုမ္ပဏီထုတ်အသစ်စက်စက်မှ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀-၄၀၀၀ ၀န်းကျင်ဘဲ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာသာ ဖက်စပ်ထုတ်ရင် ဒေါ်လာ ၂၅၀၀-၃၀၀၀ လောက်နဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်လောက်တယ်။ ဒီလိုသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ရင် ကားအသစ်တစီးမှ သိန်း ၃၀ ၀န်းကျင်ဘဲကျမယ်။ ကားတစီးတန်ဘိုးက မူလတန်ဘိုးထက် ဆယ်ဆလောက်မြှင့်နေတာ စစ်ဗိုလ်တွေ မတရားလုပ်စားနေတာ မဟုတ်ဘူးလား။
ပြီးတော့ လူထုအတွက် လိုအပ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ တယ်လီဖုံးတမျိုးနဲ့တင် လူထုအပေါ်က ခေါင်းပုံဖြတ်စားသွားတာ ငွေတွေ မနဲပါ။ ထောင်ဂဏန်း သောင်းဂဏန်းလောက်နဲ့ ပေါပေါများများချပေးရင် ရနိုင်ပါလျက် ရှားကုန်လုပ်။ သစ္စာခံမှုနဲ့ ပါမစ်ထုတ် ရောင်းစားတာကို ပြည်သူတွေက လက်ကိုင်ဖုံးတလုံးကို တန်ဘိုး (၄၅ သိန်း) လောက်အထိ ပေးပြီး ၀ယ်သုံးခဲ့ကြရတယ်။
အခုထိ ၅ သိန်းတန်ဖုံး ၆ သိန်းတန်ဖုံးစသဖြင့် တိုင်းသူပြည်သားတွေကို နင်တို့ ဘယ်လောက်ပေးနိုင်သေးသလဲ။ ပေးနိုင်သလောက်ပေးပြီး ၀ယ်လိုက်ကြဦး။ ရှိတဲ့ငွေလေး ထုတ်၊ တယ်လီဖုံးတွေ ၀ယ်သုံးကြဦးနဲ့ လုပ်စားနေတာ။ နောင်ကျရင် တသောင်းတန်ဖုံးအထိ လာမယ်။ တောရောမြို့ပါမကျန် မိသားစုတိုင်းဆီက ရှိသမျှငွေတွေ ခြစ်ချုပ်ယူသွားတယ်လို့ဘဲ ပြောရမှာပါဘဲ။ ဈေးကွက် စီးပွားရေးက စစ်အသိုင်းအ၀န်း ဈေးကွက်ဖြစ်နေတာလေ။
နောက်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေ ရောင်းချထားတဲ့ ငွေတွေကို အလကား အရေမရအဖတ်မရ ကြပ်ပြေးမှာ မလိုအပ်သေးတဲ့ အဆောက်အဦးတွေဆောက်၊ မြို့သစ်တည်၊ မြေအောက်လှိုဏ်ဂူတွေကို ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီ အကုန်ခံတူးလားတူးရဲ့။ အနုမြူဗုံးလုပ်ဘို့ ကြံလိုကြံ၊ ဘာတွေလဲ မသိဘူး။
လုပ်သမျှ လူထုအတွက် လုံးဝမပါ။ မရောင်ဆီလူး အလုပ်တွေနဲ့ တိုင်းပြည်ငွေတွေ ကုန်ခမ်းနေတာလေ။
အမှန်စင်စစ် တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက စစ်တပ်ကဗိုလ်တွေ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ရွာတွေဝင်တော့ ရွာသားတွေက စစ်တပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ထွက်ပြေးကြရတယ်။ လူမရှိတော့တဲ့ ရွာထဲကို စစ်တပ်ရောက်တော့ ရိက္ခာမပါတဲ့စစ်တပ်ဟာ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ စပါးကျည်ထဲက စပါးဆွဲ၊ ပြောင်းဆွဲ၊ လူးဆွဲ၊ ကြက်တွေ့တော့ ကြက်ဆွဲ သတ်စား၊ ၀က်တွေ့တော့ ၀က်ဆွဲ သတ်စား၊ နွားတွေ့တေ့ နွားဆွဲ သတ်စားရာကနေ ရာထူးတက်ပြီး အာဏာဖင်ထိုင်ခုံတွေနဲ့ မြို့ပြရောက်လာတော့ ကားဆွဲ၊ တိုက်ဆွဲ၊ ခြံဆွဲ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာလည်း ကိုင်ခွင့်ရရော။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ သူတို့ဘဏ္ဍာ ဥစ္စာမှတ်ပြီး သူတို့ငွေစားရင်းထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ကြတာကစတဲ့ အဓမ္မဇာတ်လမ်းတွေကြောင့်သာ မတော်မတရား မကြားကောင်း မနာသာတွေဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေရတာပါ။
ဘယ်သူသေသေ ငရွှေမာရင် ပြီးရော ......
ပြောရတာ အတော်ခက်ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ တယောက်နဲ့တယောက် မေးထိုးပြီးသူက အိမ်ရပြီ။ ငါလဲ အိမ်ရမှ။ သူက မော်တော်ကား ဘယ်လောက်တန် ဘယ်နှစ်စီးရပြီ။ ငါက ဘယ်နှစ်စီးဘဲ ရသေးတယ်။ ရှာလိုက်ဦးမှ။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲက နှိုက်လိုက်ဦးမှ။ မိုက်ကြေး ခွဲလိုက်ဦးမှ။ သူ့သားကတော့ ဘာကုမ္ပဏီ ထောင်ပြီးပြီ။ ငါ့သားက ဘာကုမ္ပဏီ ထောင်လိုက်မှ။
အမယ်လေး…..လေး။ အိမ်အလုံး ၁၀၀ နဲ့လည်း မကျေနပ်။ အလုံး ၂၀၀ လည်း မကျေနပ်။ ရှန်ဟိုင်းအထိ အိမ်တက်ဝယ်ကြ။ ကိုယ့်သားကိုယ့်သမီး ကိုယ့်မြေးအတွက်တင် မကဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အဘကြီးတွေရဲ့ ကီးပင်း (keeping) မော်ဒယ် စမောလေးအတွက်ပါ။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ အင်းယားလမ်းမှာ အိမ်နဲ့ခြံ ၀ယ်ပေးဦးမှ လုပ်နေကြတာလေ။
ဒါတင်မက ပြည်သူ့ငွေ ကဲ့ထုတ်ပြီး ကိုယ့်ဘဏ်စာရင်းထဲ မြန်မာငွေနဲ့ မြန်မာဘဏ်ထဲငွေစုတာ ခေတ်မစားတော့။ နိုင်ငံခြားဘဏ်မှာ ဒေါ်လာနဲ့ထား။ စပွန်ဆာ အဘဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကောင်းလို့ မော်ဒယ်သမီးတွေတောင် ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်းနဲ့ ရှော့ပင်း (shopping) ထွက်နေနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရလုပ်တဲ့ စီးပွားရေး စီမံကိန်းတွေထဲမှာ သာမန်ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘာများလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
သာမန်ပြည်သူထဲက အမှန်တကယ် တက္ကစီမောင်းစားသူ လူတယောက် တက္ကစီတစီးပိုင်ခွင့်ရဘို့ လုပ်ပေးခဲ့ဘူးပါသလား။
ဆိုက္ကားနင်းစားရသူ သာမန်လူတယောက် ဆိုက္ကားပိုင်ဆိုင်ဘို့ စီမံကိန်းချခဲ့ဘူးပါသလား။ ငွေကျပ် ၁၀၀ ချေးတိုင်း ၁၀ ကျပ်က ၅၀ ကျပ် အတိုးနှုန်းလောက်ပေးပြီး ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် အသေးစားချေးငွေ အစီအစဉ်မျိုး လုပ်ပေးခဲ့ဘူးပါသလား။
ဒါကို စစ်ဗိုလ်တွေအကြိုက် အောင်သွယ်လား။ လော်ဘီလား။ လောဘစ်လား။ အနောက်နိုင်ငံတွေက စစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့် ပြည်သူတွေ အထိနာပါတယ်လို့ အမေရိကန်လွှတ်တော်သွားပြီး ရွေနားတော်သွင်းသူက သွင်း၊ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေမှာ အေးချင်းရေးသူက ရေး၊ အနောက်တိုင်းရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုတွေ လျော့ကျစေဘို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဘက်က ပြည်သူ့အပေါ် ရက်စက်မှုတွေကို တရစ်လောက်လျှော့ချဘို့တော့ တလုံးတပါးမှ ပါးစပ်မဟကြဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်တင်ပြောဆိုနေတာကတော့ တဖက်သတ်ဆန်လွန်းပါတယ်။
General sanction ဆိုတဲ့ပိတ်ဆို့မှုကို ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြည်သူတွေပိုကောင်းလာမလား။ ဟင့်အင်း မထင်မိပေါင်၊ ဝေးပါသေး။ အခုလဲ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု မလုပ်ကြဘူးဆိုပေမဲ့ အာစီယံတို့ တရုတ်တို့ အိန္ဒိယတို့လို နိုင်ငံတွေက စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေကြတာပါဘဲ။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လောဘဇောတိုက်နေတဲ့ အစိုးရအချင်းချင်း ကုန်သွယ်နေတဲ့ စီးပွားရေးကို လိင်တူဆက်ဆံရေး ကုန်သွယ်မှုလို့ နာမည်ပေးရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ တကယ်တော့ ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ လုပ်နေတဲ့ ကုန်သွယ်မှု တန်ဘိုးနဲ့တင် မြန်မာပြည်သူလူထု ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးချင်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။
(21.12.10- 9.00 PM)
Share via Dorn Med
We are listening to what Daw Suu is saying. We hea...
National Youth Network သို့ .==============>>>...